Muuqaalka xafladii lagu soo bandhigayay waxqabadka Dowlada Puntland [Sawiro] Munaasibada soo bandhigista waxqabadka xukumadda Dowlada Puntland ee Soomaaliyeed,ayaa waxaa siyaabo kala duwan looga soo dhaweeyay caalamka oo idin siiba wadamada ay ku xoogan yihiin muwaadiniinta Reer Puntland.
guud ee goobta ay xafladu ka dhacaysay oo ahayd xarunta madaxtooyada Bosaaso ayaa ahayd mid si wayn looga soo shaqeeyay, waxana iskugu yimi, madaxda Dowlada, Gollaha Isimada, waxgaradka, Haweenka, Qurba joogta, Ganacsatada, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee warbahinta.
Habada maamulka Dunidaonline iyo shaqaalaha waxay idin soo bandhigayaan muuqaalka xaflada
Dunidaonline.com [email this article] [print this article] [back]
10.01.2013SHkhee Uur ku joog
Dunida online aad baad u mahadsantihiin. Marka xigta waa guul u soo hoyatay Puntland. Sanadka la sheegayo ee la leeyahay xaafidulaah madaxweyne Faroole waa ku darsaday waxaaba ka haray 11 bilood, marka ragga meelaha ka hanjabaya xisbiyo ha furtaan.
Doorashada sanadka 2014 janaweri ha isu diyaariyaan. laakiin Websityada Hawiyaha waxay qorayaan in ciidan laga soo diray Galkacyo ku soo socdaan Garoowe. Waxaan isleeyahay arintaas waa been. Waayo taasi waxay la midtahay in lagu soo duulay Ciise Maxamuud ee aan loo socon dowladda Puntland iyo Faroole, waayo waa weerar qabiileysan POST A COMMENT
Hambalyo Jubbaland State!.. Ceeb Caleykum Dowladda Xasan Shiikh!